သူမအကြောင်းအင်တာဗျူးဖြေတဲ့ ခင်ပွန်းကို သူမအတင်းကို ပြောတယ် ဆိုပြီး စိတ်ကောက်နေတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – XB Media Myanmar
သူမအကြောင်းအင်တာဗျူးဖြေတဲ့ ခင်ပွန်းကို သူမအတင်းကို ပြောတယ် ဆိုပြီး စိတ်ကောက်နေတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
October 11, 2019 Bestie_Author
မီ ဇာတ်ရုပ် နဲ့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီး နေတဲ့ နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ပိုင်ဖြိုးသု ဟာဆိုရင် သရုပ်ဆောင်ပီပြင်လွန်းတာကြောင့် သူမကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရှိနေတာပါ။ ပိုင်ဖြိုးသုက ချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဒါရိုက်တာ ဏကြီး နဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ရင်း ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ မိသားစု ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပိုင်ဖြိုးသုက သူမအကြောင်း အင်တာ ဗျူးဖြေတဲ့ ခင်ပွန်းကို သူမအတင်းကို ပြောတယ်ဆိုပြီး စိတ်ကောက်နေတဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဒါရိုက်တာ ဏကြီး က အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ သူ့ရဲ့ ဇနီးလေးက မတွေ့ရတဲ့ အချိန်တွေဆို ဂျီကျပြီး ရစ်ကြောင်း၊ သုသုကလေးလို ဂျီကျပြီး ပျော်နေရင် သူသဘောကျကြောင်းခု မကွေးရိုက်ကူးရေးသွားလုပ်နေတော့ ဖုန်းနဲ့ ရစ်တယ်၊ ကျွန်တော်ချစ်လို့ယူထားတဲ့ မိန်းကလေး ချစ်ပေးရမှာပေါ့ ချစ်ရမှာ ကျွန်တော်ရဲ့ တာဝန် ဆိုပြီး အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာ ဖြေထားပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသု က သူမအကြောင်းအင်တာဗျူးဖြေတဲ့ ခင်ပွန်းကို သူမအတင်းကို ပြောတယ်ဆိုပြီး စိတ်ကောက်ပြီး ခုလိုပြောထားပါတယ်။
” ဟိုလူကွီး… သူမြားအတငျးပွောတာမြား ပွောစရာရှားလို့ media ကိုပွောရလား???😠😠တှေ့မယျ…😤😤😤ပွနျလာမှနှဈစလောကျဂြီကပြွ ရဈပွမယျ….😈😈😈စောငျ့ကွညျ့ လိုကျ ဘာ…ဟှငျးဟှငျး… 😤ဝတုတျလူဆိုးတဲ့တဈဆိုးတညျးရှိတယျ !!! 👿” ဆိုပွီးေွ ပာထား ပါတယျ။
ချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းကို နွှဲ့ဆိုးဆိုးနေတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု ရဲ့ အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေ သိရလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ကြည့်ရူပေးကြတဲ့ မိုမိုလေး ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
Source;paing phyo thu , Reference& Credit:momolay.com
နိုင်ငံ(၄)နိုင်ငံ ပူးပေါင်းရိုက်ကူးမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ့် နေတိုး
Royal Family ရဲ့ ပှောရှှှငစှ ရာေ ကာငှး တဲ့ ပုံရိပတှှကေို ခပှှလာတဲ့ မမှငှေ့မိုရှ